शारीरको लागि पानीपुरीको बेफाईदा मात्र हैन फाईदा पनि छ ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»शारीरको लागि पानीपुरीको बेफाईदा मात्र हैन फाईदा पनि छ !
शारीरको लागि पानीपुरीको बेफाईदा मात्र हैन फाईदा पनि छ !
By मनिषा थापा on १२ माघ २०७४, शुक्रबार १०:२३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
पानीपुरी युवतीहरुले धेरै रुचाउने गरेको खानेकुरा हो। भारत लगायत विश्वभर नै पानीपुरी निक्‍कै चर्चित मानिन्छ। विशेष गरी नेपाल र भारतमा पानीपुरीको माग बढ्दो छ । सर्वप्रथम पानीपुरी भारतको मगध क्षेत्रबाट सुरुवात भएको हो।
त्यहाँको दक्षिणी भू-भाग बिहारको नामबाट चिन्‍ने गरिन्छ भने यसलाई फुल्की पनि भन्‍ने गरिन्छ। पानीपुरीलाई सही ढंगबाट बनाएर खाएमा यसले शरीरलाई एसीडिटीबाट राहत दिलाउँछ भने मुडलाई फ्रेस बनाउँछ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो। विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलको नेतृत्वमा मंगलबार गएको बजार अनुगमन टोलीले चाबहिलस्थित धोविखोलानजिक एक कवाडी पसलबाट दूषित र हानिकारक तेल बिक्री गरेको फेला पारेको हो।